IVA 15T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 15T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ ,	၄၀,၀၀၀ USD ဒျေါလာအထကျ ,	Hot
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA15T
IVA15T 15ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price in the market.
IVA15T ၁၅ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ကွာလတီနဲ့ ဈေးကွက်မှာ အသက်သာဆုံး ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Video of producing an IVA 15ton Stainless Steel Tube ice making machine
In response to the growing demand for ice due to hot weather, numerous ice-making machine facilities, including inferior quality ones, have appeared. Therefore, businesses with significant ice needs such as restaurants, supermarkets, restaurants, hotels, bars, or households often choose ice-making machines to ensure the ice quality and save cost. IVA15T 15Ton Stainless Steel Tube ice making machine will be the best choice for the customers who want to catch up with this increasing trend.
ယခုအခါမှာ ရေသန့်ရေခဲကို မှီခိုလာရတာနဲ့အမျှ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ရေသန့်ရေခဲရဲ့ ကွာလတီက အရမ်း တင်းကြပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အရည်အသွေးနိမ့် ပစ္စည်းတွေလည်း ဈေးကွက်မှာ ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ Viet An က အရည်အသွေးမြင့် ရေခဲစက်တွေကို ပေးပို့တဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တာနဲ့အညီ ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် IVA 15T တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)တွေကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
IVA15T 15TON TUBE ICE MAKING MACHINE (100% NEW)
IVA 15T ၁၅ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
Viet An is the leading company in manufacturing, importing, and distributing the ice-making machines, RO purified water filtration systems, bottle filling machines, bottle blowing machines, etc. We assemble and control the product quality according to ISO 9001:2015 standards - the most rigorous international standards currently.
Among various sources of ice-making machines, Viet An is proud to be the prestige brand to provide 100% ice-making machines with high quality, meeting every single demand of the customers.
Viet An သည် ရေခဲထုတ်စက်များ၊ RO ရေစစ်များ၊ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးမှုတ်စက်များကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချပေးတဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ISO 9001:2015 နဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရေခဲထုတ်စက်မျိုးစုံကြား Viet An မှ ၁၀၀% ကွာလတီမြင့်သော ဝယ်ယူသူတွေအကြိုက်တွေ့သော ရေခဲထုတ်စက်များကို ထုတ်လုပ်ပေးရသော ကုန်တံဆိပ်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Currently, Viet An is offering IVA15T 15Ton Stainless Steel Tube ice-making machines at higher prices than other manufacturers. You must be wondering why our products cost more than other domestic ones? It is because our products are 100% without any old components. Meanwhile, other domestic suppliers supply ice-making machines with old pieces. Typically, the domestic compressors are old devices with 10years of use. This is the main reason for that low cost. Also, the domestic manufacturers apply many other old components in the ice-making machines to get the low price. Therefore, customers should study carefully before makingadecision.
ယခုအခါ Viet An ရဲ့ IVA 15T ၁၅ တန် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်များကို အခြားစက်တွေထက် ဈေးမြင့်စွာ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ပြည်တွင်းက စက်တွေထက် ဈေးပိုကြီးနေရလဲဆိုတာ သင်သိချင်ပါသလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ အစိတ်အပိုင်းဟောင်းတွေ လုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်တွင်းက ပေးပို့သူများက အစိတ်အပိုင်းဟောင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်း ဖိသ်ိပ်စက်များက ၁၀ နှစ်ကြာ အသုံးပြုထားတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးပေါတာဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင် ဈေးနည်းနည်းနဲ့ ရောင်းနိုင်ဖို့ အခြား အစိတ်အပိုင်းဟောင်းများကိုလည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်ယူသူများက သေချာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ Viet An ကသာ ရေခဲထုတ်စက်တွေထဲမှာ ဖိသိပ်စက်အသစ်ကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိသိပ်စက်တွေကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြာရှည်အခံနိုင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်တို ဖြတ်တောက် ဖိသိပ် ပုံသွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတဲ့ လုံးဝ အော်တို CNC စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဖိသိပ်စက်တွေရဲ့ လျှပ်စစ်အဆို့စနစ်ကို Finland မှာရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းထားပါတယ်။
Several causes of compressor damage
ဖိသိပ်စက်ကို ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းအရင်းများစွာ
Burned electric coil due to excessive liquid remained
အရည်အပိုတွေ ကျန်နေခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ကွိုင် လောင်ခြင်း
Damaged valve due to due to excessive liquid remained
အရည်အပိုတွေ ကျန်နေခြင်းကြောင့် အဆို့ ပျက်စီးခြင်း
Broken connection rods due to excessive liquid remained
အရည်အပိုတွေ ကျန်နေခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ တိုင်များ ကျိုးခြင်း
Foaming oil due to excessive liquid remained
အရည်အပိုတွေ ကျန်နေခြင်းကြောင့် ဆီအမြုပ်ထစေခြင်း
The compressor cannot evenly distribute the air within the inner system due to excessive liquid remained Excessive liquid affects other parts
အရည်အပိုတွေ ကျန်နေခြင်းကြောင့် ဖိသိပ်စက်က လေကို အတွင်းစနစ်ထဲသို့ မဖြန့်ဝေနိုင်ခြင်း။ အရည်အပိုတွေ ကျန်နေခြင်းကြောင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေခြင်း
The liquid and gas separation system that is only available in Viet An. The liquid and gas separation system is therefore designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the air line for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို Viet An မှာသာလျှင် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းကို အရည်နဲ့ အငွေ့ကို ခွဲထုတ်ပေးဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ သို့မှသာ လေထဲမှာ ရေတွေမကျန်စေဘဲ ချောချောမွေ့မွေ့ လည်ပတ်နိုင်ကာ စက်ရဲ့ သက်တမ်းကို ရှည်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The components of the Condenser and Cooling tower used in the ice-making machine are imported and assembled by Viet An, ensuring the finest quality and the most competitive price.
The electrical system used for Viet An’s ice-making machines is automatic. The device will immediately start with only one on/off button. The operation will automatically stop when there is an electrical problem incurred. Thus, you can feel secure with Viet An’s ice-making machine.
The pump system used in Viet An’s tube ice making machine is made from stainless steel. It isaCBU (Completely Built-Up) product imported by Viet An. Currently, the stainless steel pumps are only applied in Viet An’s ice-making machines. For other manufacturers, the pump systems are made of cast iron with cheaper price, and shorter durability.
ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေစုပ်စက်စနစ်ကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါက အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Viet An မှ တင်သွင်းထားပါတယ်။ ယခုအခါမှာ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစုပ်စက်တွေကို Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာသာ အသုံးပြုပါတော့တယ်။ အခြား ထုတ်လုပ်သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ရေစုပ်စက်တွေကို ဈေးပေါတဲ့ သံကြွပ်တွေနဲ့သာ ပြုလုပ်ကြပြီး ကြာရှည်လည်းမခံပါဘူး။
Bucket charging motor - blade setBucket charging motor - blade set
To create our own brand equity, we have researched and designed the exclusive components used for our ice-making machines.
Above are some of the latest technologies typically used for Viet An’s ice-making machines. They make the production process much quicker, convenient, and cost-effective. These exclusive technologies are only available in Viet An. Thanks to these products’ great benefits, the customers have been widely chosen despite the high prices. With these new machines, you can remarkably save energy and reduce production time.
ဖိသိပ်စက်တွေရဲ့ လျှပ်စစ်အဆို့စနစ်ကို Finland မှာရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီက တင်သွင်းထားပါတယ်။
Viet An’s Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving. Quý khách hãy cứ trông thật xa. Nếu 1 máy đá 15 tấn cũ và mới cùng chạy hết công suất. Thì vấn đề gì sẽ xảy ra:
In addition, you will be offerapackaging system for free
ထို့အပြင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်ကို အခမဲ့ရရှိမှာ
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA 15T Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
If you still decide to choose an old compressor withoutaliquid and gas separation system, an old condenser, old pump, and other components, go to https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/may-lam-da-vien/
ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ပိုးမှုစနစ်က လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ IVA 15T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်လည်း ပေးဆောင်ပါတယ်။
Formerly known as Viet An General Trading Limited Company and equitized in August 2009, Viet An General Trading Joint Stock Company is the leading company in manufacturing, importing and distributing the ice making machines, RO purified water filtration systems, bottle filling machines, bottle blowing machines, etc.
Asaleading enterprise with nearly 20 years of experience in importing, manufacturing and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc., we’ve always tried our best to apply the most advanced technology (American, European, Japanese technology) into the production. Thanks to our unceasing efforts, we have achievedavariety of honorable prizes and certificates: Viet An have been awardedavariety of honorable prizes and certificates, including:
Viet An General Trading Limited Company လို့ လူသိများခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Stock Company လို့ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ရေခဲထုတ်စက်များ၊ RO ရေစစ်များ၊ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးမှုတ်စက်များ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဘူးနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ စက်တွေ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ အတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်စတဲ့ ခေတ်မီနိုင်ငံများမှ နည်းပညာတွေကို ထုတ်လုပ်မှုမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မလျှော့တဲ့ ဇွဲကြောင့် ဆုများနဲ့ လက်မှတ်မျိုးစုံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
One of 100 enterprises to receive Certificate of Merit President Tran Dai Quang on January 7, 2017
Certificate of Merit by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc for the individual collectives with outstanding achievements in the implementation of the tenth plenary session of the 7th Central Committee of the Communist Party of Vietnam (CPV).
Some of our big customers
Viet An ၏ အမာခံဝယ်ယူသူအချို့
Asareputable and experienced unit, we have been trusted by numerous large enterprises:
ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံကြောင့် လုပ်ငန်းကြီးမြောက်မြားစွာရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရရှိထားပါတယ်။
In 2011 the company is the main contractor of the Corporation Thai Son (MPS) on the conveyor belt filter pure water, drinking water for the inmates of the camps from north to south as the project K1 + K4 in Thanh Ba - Phu Tho, sewage system channels5- Hau Giang, pure water systems in prisons plow - Tay Ninh, Phu Giao clean water plant - Binh Duong, etc.
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Corporation Thai Son (MPS) အတွက် ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်ရေစစ်၊ Thanh Ba- Phu Tho မှ မြောက်မှ တောင် စခန်း K1+K4 ပရောဂျက်အတွက် ရေသန့်၊ channels 5- Hau Giang အတွက် ရေဆိုးစွန့်ထုတ်စနစ်၊ Tay Ninh, Phu Giao ရေသန့်စက်ရုံ- Binh Duong စတာတွေအတွက် ရေသန့်စနစ် စသဖြင့် အဓိက ကန်ထရိုက်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
Besides the first and unique ISO 9001:2015 certificate in Vietnam for the energy-saving tube ice-making machines, Viet An also received various exclusive brand certificates for the products such as RO purified water filtration system from the outstanding customers such as Vinamilk, Diana Bac Ninh, Sam Sung Vietnam, Lusun Sai Gon, Shinhan Vina.
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတကာစံချိန် ISO 9001:2015 နဲ့ညီသော Inox VA5T ပါဝါချွေတာခြင်းက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးနဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ် ရဲတွေကလည်း ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်အတွက် RO ရေစစ်ထုတ်လိုင်းကို လက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
In 2012, Viet An continued to signanumber of contracts of big amounts to provide purified water filtration systems for the light industrial parks such as textile, typically Winners Vina in Thanh Hoa, Cedo in Bac Ninh, Goshi Thang Long in Gia Lam, Ha Noi. In this year, Viet An becameatrusted partner to the domestic FDI businesses such as WB, ODA, FDI in the field of water processing.
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ Viet An မှ အထည်အလိပ်လို စက်ရုံတွေအတွက် ရေသန့်စက်တွေ ပေးပို့မယ်လို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။ Thanh Hoa မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Winners Vina, Bac Ninh မှာရှိတဲ့ CEDO Korean company, Gia Lam,Hanoi မှာရှိတဲ့ Goshi Thang Long Company တို့နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နဲ့ အိန္ဒိယက ပါတနာတွေ ဖြစ်လာာပြီး World Bank, ODA, FDI စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ရေစစ်ပစ္စည်းတွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ယုံကြည်မှု ရလာပါတယ်။
In 2013, Vietnam became the contractor for Vinamilk Tuyen Quang to supply water processing and filtration systems used for animal husbandry.
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ Vinamilk Company Tuyen Quang အတွက် ကန်ထရိုက်တာ ဖြစ်လာပြီး ရေစစ်လိုင်းတွေ ပေးပို့ပါတယ်။
In addition to the industrial machines, we also distribute and advise the installation of tube ice-making machines, filling systems, etc. for the customers nationwide. Our products are 100% new and imported from developed countries such as Japan, America, Korea, etc. and bring back to us millions of USD revenue per year.Our new machinery will help to bringasmooth, stable operation and make it easy to maintain or replace the equipment.
ထို့အပြင် ရေခဲထုတ်စက်တွေ၊ လောင်းဖြည့်စက်တွေကို နိုင်ငံအနှံ့ တပ်ဆင်ကြဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်တွေက ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ ကိုရီးယား စတဲ့ ခေတ်မီနိုင်ငံများမှ တင်ပို့ထားတဲ့အတွက် တစ်နှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းချီ အမြတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်အသစ်က ချောမွေ့ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ လည်ပတ်မှုကို ယူဆောင်လာပေးပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ အစားထိုးဖို့လည်း လွယ်ကူစေပါတယ်။
Call us now at 0949 41 41 41 or 0942 41 41 41 to own an IVA15T 15ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price in the market.
အရည်အသွေးမြင့် ၁၅ တန်ရေခဲထုတ်စက်ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူဖို့ ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
KL22 cold storage system
VAMĐ 16T Water filtration system
Hỏi đáp & đánh giá IVA 15T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)